Imigaqo eli-10 yeentlanganiso ezifanelekileyo | Martech Zone
Imigaqo eli-10 yeentlanganiso ezifanelekileyo
NgoMvulo, nge-4 kaDisemba ngo-2006 NgoLwesihlanu, Oktobha 24, 2014 Douglas Karr
Abanye abantu bayazonwaya iintloko zabo xa ndishiywe lixesha entlanganisweni okanye kutheni ndingazamkeli iintlanganiso zabo. Bacinga ukuba kukrwada ukuba ndingabonisa kade… okanye ndingaveli kwaphela. Into abangazange bayiqonde kukuba andikaze ndilibazise kwintlanganiso efanelekileyo. Ndicinga ukuba kukrwada ukuba babambe intlanganiso okanye bandimema kwasekuqaleni.
Iintlanganiso ezifanelekileyo zibizwa xa zifuneka.
Iintlanganiso ezifanelekileyo azicwangciswanga kule minyaka mithathu izayo… kuyahlekisa ukubiza iintlanganiso ezingenanjongo nokuphazamisa imveliso.
Iintlanganiso ezifanelekileyo zibutha iingqondo ezifanelekileyo ukuba zisebenze njengeqela ukusombulula ingxaki okanye ukumilisela isisombululo.
Iintlanganiso ezifanelekileyo asiyondawo yokuhlasela okanye yokuzama ukuhlazisa amanye amalungu.
Iintlanganiso ezifanelekileyo yindawo yentlonipho, ukubandakanywa, ukusebenzisana kunye nenkxaso.
Iintlanganiso ezifanelekileyo ziqala ngoseto lweenjongo zokugqibezela nokugqiba ngesicwangciso somsebenzi sokuba ngubani, ntoni kwaye nini.
Iintlanganiso ezifanelekileyo zinamalungu agcina isihloko kwinqanaba elifanelekileyo nangexesha elifanelekileyo ukuze ixesha lokudityaniswa kwawo onke amalungu lingachithwa.
Iintlanganiso ezifanelekileyo kufanele ukuba zibe nendawo ekhethiweyo eyaziwayo ngaphambi kwexesha ngawo onke amalungu.
Iintlanganiso ezifanelekileyo asiyondawo yokufihla i-butt yakho (yile imeyile).
Iintlanganiso ezifanelekileyo asiyondawo yokuzama ukufumana abaphulaphuli (leyo yinkomfa).
Kukho okwahlukileyo. Ndiyayithanda le ntlanganiso ifanelekileyo… oh ... kunye nabo bane-M & Nks.
tags: iintlanganiso ezilungileyoukuba nentlanganiso njaniNtla nganisoimigaqo yeentlanganiso
Yonke iOfisi yaseKhaya ifuna eNye!
Ngomhla wama-6 ku-Disemba 2006 ngo-1: 21 AM
UBrandon wongeza iposti enkulu malunga neendleko zentlanganiso: (inani lababekhona * inqanaba elihlawulekayo * ubude bentlanganiso = $$$ imali enkulu)
Ngomhla wama-6 ku-Disemba 2006 ngo-3: 55 PM
Ndizithiyile uninzi lweentlanganiso kwaye ndafumanisa, iintlanganiso ubukhulu becala, bezingenanto yakwenza nengeniso okanye ixabiso lesabelo. Kuya kufuneka uluthengise olu luhlu kubo bonke abaphathi
Ngomhla wama-6 ku-Disemba 2006 ngo-4: 14 PM
IiM & M's zilungile… Iibrownies zingcono! Wakha wabanentlanganiso malunga nokuba neentlanganiso? indlela yokubonisa ukuhleka
Ngomhla wama-6 ku-Disemba 2006 ngo-6: 04 PM
Iintlanganiso malunga neentlanganiso… zilibale leyo! Argh!
Mhlawumbi kuya kufuneka uzame http://www.agreedo.com. Idibanisa amanqaku akho amaninzi enza iintlanganiso zifaneleke ngokwemiqathango yakho.